Somaliland: Siyaasi Cabdi Haybe Oo Meesha Ka Saaray Inuu Marna Xil Wasiirnimo Ka Qabanayo Xukumadda KULMIYE,Beeniyayna In Madaxtooyadu Ergo Usoo Dirtay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siyaasi Cabdi Haybe Oo Meesha Ka Saaray Inuu Marna Xil Wasiirnimo...
Siyaasiga Cabdi Haybe Maxamed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa meesha ka saaray inuu marna xil ka qabanayo xukumadda madaxwayne Siilaanyo iyo xisbga KULMIYE.
Waxa soo baxay warar sheegaya in madaxtooyada Somaliland guclo orod ugu jirto sidii ay usoo dhawayn lahayd siyaasigan oo jeediya khudbado ad adag o oak dhan ah, waxaanay sida ay wararku sheegayan madaxtooyadu doonaysaa in xil wasiirnimo loo magacaabo si looga reebo xisbiga WADDANI.
Haseyeesee Cabdi Haybe oo uu geeska Africa wax ak waydiiyay inay jirto ergo madaxtooyada katimi oo losoo diray iyo hadiiba xil looga magacaabo xukmadda wuu sheegay inaanay jirin cid madaxtooyada ka socota oo ula timid ergo.
“Ma jirto cid ii timi waxbana kama jiraan”ayuu yidhi Siyaasi Cabdi Haybe.
Mar uu geeska Africa waydiiyay hadiiba isku shaandhaynta la hadal hayo lagu soo daro oo xil wasiir loo magacaabo waxaana uu yidhi.
“Adeer wasuur lix bilood ah maxaan ku fali lahaa maan qaateen marnaba wasiir dawladda KULMIYE ah marnaba ma qaateen mana igi raga waxaas oo kale loola yimaado.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi Cabdi Haybe “ Markaas wararkaasi waxba kama jiraan diyaarna uma ihi inaan marnaba ka qayb noqod xukumadda KULMIYE”sidaas ayuu yidhi Cabdi Haybe.
Cabdi Haybe ayaa hore uga mid aha asaasayaashii xisbiga KULMIYE waxaase uu xisbigaasi ka baxay kadib markii ay isku dhaceen madaxwayne Siilaanyo oo wakhtigasi ahaa hogaamiyihii mucaaradka ahaa ee KULMIYE,waxaanuu xilal wasiirnimo ka qabtay dawladii madaxwayne Daahir Riyaale isaga oo hadana kamid ah madaxda xisbiga WADDANI e mucaaradka ah.